Mananontanona Ny Fe-potoana Farany Hoan’i Trinidad & Tobago Handaniana Ny Lalàna Amerikàna Momba Ny Hetra Raha ireo Politisiana Kosa ‘Milalao’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2016 18:23 GMT
Ny 30 Septambra 2016 no fe-potoana farany ho an'i Trinidad sy Tobago ho tonga mpanasonia ny FACTA., lalàna momba ny fampoandoavana hetra ireo kaonty ivelan‘i Etazonia. Ilay lalàna, izay navoakan'ny kaongresy Amerikàna tamin'ny 2010, dia miezaka manao izay mba hahazoana antoka fa handoa hetra ireo olom-pirenena Ameriàna sy ny mponina ao Etazonia izay manana fananana any ivelan'ny firenena.
Ny lalàna dia manome fahefana ireo banky amerikana mba hitazona ampahany (hatramin'ny 30%) amin'ny vola aloa amin'ireo toeram-pandraharahana ara-bola any ivelany izay tsy manaiky hanome vaovao momba ireo mpanjifany izay manana kaonty amerikana. Raha ny marina, afaka lavin'izy ireo hatramin'ny fanaovana raharaham-barotra miaraka amin'izy rehetra ireo. Mety hiteraka vokadratsy lasa lavitra kokoa aza ny tsy fanekena: ireo tolotra lehibe omen'ny banky toy ny fampiasana karatra fisintonam-bola, ny famindràna vola elektronika ary ny fampodiana vola dia mety ho tapaka, dia vao maika koa hihena ny toe-karena ao Trinidad sy Tobago — izay efa malemy noho ny vidin'ny angovo izay ambany — ary ny vidim-piainana ankapobeny sy ny fanaovana raharaham-barotra dia mety hitombo.
Na izany aza, tsy mbola nolaniana tao amin'ny parlemantan'ny firenena ilay volavolan-dalàna. Na dia niara-nifidy tsy nisy nitsipaka ny fanarahan-dalàna aza ny governemanta, ny mpanohitra amin'izao fotoana izao — izay nandroso ilay volavolan-dalàna tamin'ny fotoana naha tao anatin'ny fitondrana azy ireo — no misakana ny famoahana izany. Manana mpikambana 23 ao amin'ny Antenimieram-Pirenena ny governemanta, nefa vato 26 no ilaina mba hahalany ilay volavolan-dalàna. Na eo aza ny fanizingizinana hoe “tsy misy olona te-hifidy io volavolan-dalàna io mihoatra [azy ireo], ao amin'ny parlemanta izay nivory tamin'ny 23 septambre 2016, nifidy “tsia” ny mpikambana tsirairay amin'ny mpanohitra (54:46 amin'ity lahatsary ity). Ho an'ny mpanohitra, nomeny tsiny ny governemanta ho “mamadika ilay olana ho politika.”
Tao anatin'ny famelabelarany ho an'ny parlemanta, nomarihan‘ny Minisitry ny Fitantanam-bola, Colm Imbert, ny “Toko faha-8 –manana olana amin'io ny mpanohitra. Tsy misy zavatra ao amin'ny andininy faha-4 amin'ilay lalàna momba ny vola miditra, ny lalàna fiarovana ny antontan-kevitra na lalàna hafa misy fiantraika toy izany manakana ny fanaparitahana torohay. Manamafy ny mpanohitra fa izany dia manaisotra ny fiarovana ny olom-pirenentsika, fiarovana izay mety homen'ny lalàna ho azy ireo.
Na dia efa nilaza aza ny governemanta fa handray an-tànana ny telo amin'ireo olana fito naroson'ny mpanohitra, tsy voaresaka mihitsy ilay raharaha.Taorian'ny famelaberan'i Imbert tao amin'ny parlemanta tamin'ny zoma lasa teo, nangatahany tamin'ny filohan'ny parlemanta ny hanemorana ora iray ny fotoana, ka mandritra izany dia ho afaka hiara-hipetraka handinika ny fanitsiana ilay volavolan-dalàna ny ankolafy roa. Nefa nandà ny mpanohitra. Tsy ela taorian'ny niverenan'ny fotoam-pivorian'ny parlemanta indray, bedin'ny mpitarika fivoriana ilay mpitarika ny mpanohitra ary nangatahany mba hiala. Nivoaka ny sisa tamin'ny mpanohitra (afa-tsy mpikambana iray) — tanatin'ny fihetsika toy ny fanehoana firaisankina.
Ara-teorika, tokony hivory ny parlemanta ny 30 septambra ary handany ara-potoana ilay volavolan-dalàna mba hanatratra ilay fe-potoana– nefa amin'io daty io no hanoloran'ny ministry ny fitantanam-bola ny tetibolan'ny firenena ho an'ny taona 2017, noho izany tsy ho afaka horesahina akory ny FACTA. Afa-tsy hoe raha manaiky hanemotra ny fe-potoana farany ny Amerikana, izay toa azo inoana amin'izao fotoana izao fa ho tavela aminà toerana marefo i Trinidad sy Tobago. Na inona na inona mitranga, anefa, tezitra ireo mpampiasa aterineto.
Mazava ho azy, izany akory tsy milaza fa niombon-kevitra tanteraka tamin'ilay lalàna izy, satria nampionona ny tenany hoe tsy maintsy hitranga ny fanarahana ny lalàna :
Mandritra izany, ny Fikambanan'ny Tomponà Banky ao Trinidad sy Tobago no mandoa ny faktiora, ireo tranoben'ny varotra dia mitaky fampanarahan-dalàna ary nanome ny fanehoankevny ny Kaomisionan'ny Fiarovana sy Fifanakalozana ao amin'ny firenena dia nanome hevitra.
Na izany aza toa mizarazara arakaraka ny antoko politika ireo mpiserasera. Mpampiasa Facebook iray, Gideon Charles, nanondro ny fandavan'ny mpanohitra tsy hifidy ilay volavolan-dalàna ho toy ny andrana mahery vaika amin'ny fanakorontanana, manombatombana ny mpanohitra ho tsy tia ny fampanarahana ny FACTA “satria mety hampiharihary ny halatra madinika, ny fanodinkodinana ny volan'ny mpandoa hetra”, nataon'ny governemanta fahiny sy ny UNC mpanohitra amin'izao fotoana. Ny sasany mbola be hanihany, raha ilay mpampiasa Facebook, Susan Charles, indray kosa niantso ny ministry ny fitantantambola amin'ny fomba fanaovany politika:
Noho ny fandaniana ilay volavolan-dalàna mbola any ankibon'ny omby, manontany tena ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy ao Karaiba raha hiaraka hanao zavatra tsara goavana kokoa ny governemanta sy ny mpanohitra — na amin'ny tenin'Atoa Live Wire:
Nimenomenona momba ny FACTA koa ny filohan'i Rosia, Vladimir Putin, izay nolazainy fa fanafihana ny fiandrianam-pirenena Rosiana. Avy eo, 24 ora talohan'ny fe-potoana farany nomen'ny Amerikana, nanaiky i Putin ary nanasonia tamin'ny 30 jona 2014.